Wararka Maanta: Isniin, Mar 9 , 2020-Wasiirka waxbarashada XFS iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Baraawe ka dhagax dhigay iskuul lagu baran doono cilmiga badda
Dhagax dhiga iskuulkan ayaa waxaa goob joog ka ahaa wasiirka gargaarka iyo mareynta masiibooyinka Soomaaliya Xamse Siciid Xamse, wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdulahi Xaamud Maxamed, danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Siciid Fiqi iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka Soomaaliya.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre ayaa bogaadiyay cid kasta oo gacan ka geysaneysa dhismaha iskuulkan iyo cidka bixisay dhulka laga dhisayo iskuulka.
“ Waxaan u mahad celinaya qoyska reer Xamse oo dhulkan ku deeqday waxana maanta nagala jooga wasiir Xamse, aniga shaqsiyan farxad ayay I tahay in maanta oo u jooga in riyadii wasiir Burci anigoo wasiir waxbarasho aheyn uu igala hadli jiray, sidoo kale waxaan u mahad celinaya madaxweyne Laftagareen, oo door muuqda ka qaatay horumarinta waxbarashada, mudadii uu koonfur Galbeed hadda uu joogay waxaa la hirgeliyay ilaa 7 iskuul, iskuulkan wuxuu qeyb ka yahay saddex iskuul oo lagu baranayo farsamada, kan waxaa lagu baran doonaan badda, mid lagu barto farsamada gacanta Jowhar ayaa laga dhagax dhigi doonaa, kan saddexaadna waxaa laga hirgelin doonaan Guriceel, waxana lagu baran doonaa cilmiga xoolaha”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta gareen ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ahmiyadda koowaad ay siinayaan horumarinta waxbarashada.
“ Mudane wasiir waan kaga mahad celineyna sida aad uga war qabto dowlad goboleedka Koonfur Galbeed baahiyaha dhanka waxbarashada ee ka jira, anaga ka dowlad goboleed ahmiyadda koowaad waxaa noo ah waxbarashada si jahliga looga saaro dadka, waxana u mahad celinaya qoyska reer Xamse, allaha unaxariiste wasiir Burci oo dadaal badan ku bixin jiray horumarinta bulshada Soomaaliyeed, kuwa heysa dhulka waxbarashada waxaan leenahay baneeya”ayuu yiri madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii dalka looga hirgelin lahaa iskuullo waxbarasho oo dhalinyarada Soomaaliyeed lagu baro xirfado ay ku shaqeystan, si nolosha reerkooda ay u kaafiyaan.